ज्योतिष ज्ञान – MediaNP
काठमाडौँ । आज भोलीका धेरै युवायुवतीहरु फेसबुकको माध्यमबाट प्रेममा परेका हुन्छन् । प्रविधीको तीव्र विकाससँगै फेसबुकको मायाले कसैलाई निकै फाइदा गरेको छ । अर्कोतर्फ फेसबुकले प्रेम धेरैलाई बेफाइदा पनि पुयाएको छ । किनभने आजभोलीको केही
यी ५ राशी भएका मानिसहरु बोल्छन् हरेक पाइलामा झुट ! कुन कुन हुन् ती राशी ?
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००७:५५0
काठमाडौँ । झुट बोल्ने मानिसहरुलाई समाज र परिवारमा खराब भनिने गरिन्छ । किनभने एक असल व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागी होस् या कुनै परिस्थितिमा झुट बोल्ने गर्छन् । त्यसपछि उक्त व्यक्तिलाई समाजमा खराब मानिसमा गनिने गरिन्छ
१६ वर्षपछि जुरेको अक्षय तृतीयाको यस्तो महासंयोग, लक्ष्मी र विष्णुलाई प्रसन्न पार्नुहोस् मिल्नेछ खुसी नै खुसी
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००८:११0
काठमाडौँ । बैशाख महिनाको शुक्ल पक्षको तृतिय तिथिको दिन मनाइने अक्षय तृतियाको दिनलाई हिन्दु धर्ममा विशेष महत्व दिने गरिन्छ । पौराणिक मान्यता अनुसार अक्षय तृतियको तात्पर्य भनेको यस्तो दिन हो जुन दिन जस्तो काम गरेपनि
यी हुन् भगवान शिवको प्रिय अक्षरहरु ! जसबाट नाम सुरु हुने व्यक्तिले सधै पाउँछन् शिव भगवानको आशिर्वाद !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ००८:३६0
काठमाडौँ । भन्ने गरिन्छ हरेक व्यक्तिको रुप भगवान अनुसार फरक फरक हुने गर्छ । भगवानले हामी भित्र हुने कुनै पनि कुरालाई अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । हरेक भगवानलाई उचित तरिकाले पुजा आरधना गर्न सकेमा भगवानको आशिर्वाद
जानिराख्नुहोस् ! सपनामा यी देवी देवता देखे बद्लिनेछ तपाईको भाग्य ! मिल्नेछ खुसी नै खुसी !
MediaNPप्रकाशित मिति: , ०, ०१०:५५0
काठमाडौँ । सपना देख्नु सामान्य कुरा हो । तर हरेक दिन देखिने सपनाले जीवनमा निकै प्रभाव पारेको हुन्छ । अक्सर धेरै मान्छेले सपनामा देखेको कुरालाई बिपनामा भुल्ने गर्छन् रत सपनाको परिणमबारे थाहा पाउन सक्दैनन् ।
सावधान ! २०१९ मा यी राशी भएका व्यक्तिले नलिनुहोस् ऋण ! नत्र जीन्दगी नै डुब्ला ऋणै ऋणमा !
काठमाडौँ । सन् २०१९ को करिब पाँच महिना बित्न लाग्यो । साल परिवर्तन भएसँगै ग्रह पनि परिर्वतन हुने गर्छ । यसरी परिवर्तन भएको ग्रहको असर राशीमा पर्ने गर्छ । त्यस्तै ज्योतिष शास्त्र अनुसार २०१९ मा